Howlgallo Amaanka lagu sugayay oo laga sameeyay qeybo ka tirsan gobolada Banaadir iyo Shabeelaha Hoose (Daawo Muuqaal) – Radio Muqdisho
Howgalkani ay ciimadda hay’adda Nabad iyo sugida iyo Sirdoonka Qaranka , Soomaaliyeed ay sameeyeen ayaa lagu xaqiijinanyay amaanka ayaa maanta laga sameeyay laga bilaabo Isgoyska dabka ilaa iyo deeganka Ceelashadda Biyaha,iydoo lagu argayay wada ciimadda oo baaraya gadiidka iyo dadka saaran.
Inta uu socday howgalka ayaa waxaa lagu soo qabqabtay Shan ruux oo tuhmay in ay xariir la leeyahiin kooxda gabalkeeda dhacay ee Al-shabaab kuwaas oo loo gudbiyay Laamaha dambi baarista ee Soomaaliya si look ala cadeeyo in ay ka tirsan yihiin Al-shabaab iyo in kale.
Markii uu soo dhamaaday howgalkaasi balaaraan ee ciimadda hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka ay maanta ka fuliyeen deegaano ka wada tirsan gobolada Banaadir iyo Shabeelaha Hoose ayaa waxaa warbaahinta Qaranka la hadlay Maxamed Yuusuf Afhayeenka Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya isagoo sheegay in u jeedada howlgalkan aheyd xaqiijinta Amaanka magaalada Muqdisho iyo ka hor tagidda falalka kooxda Al-shabaab.
Maxamed Yuusuf ayaa sidoo kale shacabka Soomaaaliyeed ugu mahadceliayya sida ay ula shaqeeyeen ciidanka isla markaana waxaa uu ku bogaadiyay in ay sii wadaa ka qeyb qaadashada sugidda Amaanka magaalada Muqdisho.
Howgalkani ayaa qeyb ka ah dadaaladda ay ciimadda hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ay kaga hortagayaan qordhiyaasha ay dhacabka ku dhibaateynayaan kooxda Al-shabaab.
Mas’uuliyiinta Akadeemiyadda Fanka iyo Suugaanta oo ka tacsiyaysay Geerida Dr Kadare